Reader (နေ့စဉ်ဖတ်စရာများ) 1.0 APK Download - Android News & Magazines Apps
APK Downloader Apps News & Magazines Reader (နေ့စဉ်ဖတ်စရာများ) 1.0
Reader Blog သည် ၂၀၁၅၊ ၄လပိုင်းတွင်တည်ထောင်သည်။
မည်သူမဆို အထက်ပါအကြောင်းအရာနှင့် သက်ဆိုင်သောပို့စ်များကိုရေးသားပေးပို့နိုင်ပါတယ်။
Reader (နေ့စဉ်ဖတ်စရာများ) App ကို
၂၀၁၅၊ ၅လပိုင်းတွင် Admin - Khun Myo Wai (Reader) မှ
ပထမဆုံးဗားရှင်း 1.0 ကို Android ဖုန်းများအတွက်ထုတ်ဝေပေးလိုက်ပါသည်။
Reader Blog နှင့် App အတွက်မည်သူမဆို အကြံပြုစာများ
Reader Blog သညျ ၂၀၁၅၊ ၄လပိုငျးတှငျတညျထောငျသညျ။
မညျသူမဆို အထကျပါအကွောငျးအရာနှငျ့ သကျဆိုငျသောပို့ဈမြားကိုရေးသားပေးပို့နိုငျပါတယျ။
Reader (နစေ့ဉျဖတျစရာမြား) App ကို
၂၀၁၅၊ ၅လပိုငျးတှငျ Admin - Khun Myo Wai (Reader) မှ
ပထမဆုံးဗားရှငျး 1.0 ကို Android ဖုနျးမြားအတှကျထုတျဝပေေးလိုကျပါသညျ။
Reader Blog နှငျ့ App အတှကျမညျသူမဆို အကွံပွုစာမြား
App Information Reader (နေ့စဉ်ဖတ်စရာများ)
Myanmar All Sim Register App!Registration you sim Free with this app.You can register all Myanmar sim Card, MPT, Telenor,Ooredoo,MecTel.Very simple useful App.You can Feedback anythingIf you have any problem in this app Please contact [email protected]>>> Facebook <<<@==================https://www.facebook.com/[email protected]>>> Email <<<@[email protected] Invite your friends For Register Their SIM Cards withThisApp!Thanks For Using My App.////////////////////////////////(Myanmar Zawgyi Font)မိမိတို့ရဲ့ဆင်းမ်ကဒ်များကိုအွန်လိုင်းကနေအလွယ်တကူမှတ်ပုံတင်လို့ရနိုင်မယ့် Appဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိ Telenor, MPT,Ooredoo,MecTelဆင်းမ်ကဒ်များအားလုံးမှတ်ပုံတင်လို့နိုင်ပါတယ်။အဆင်မပြေတာတွေ ဒါမှမဟုတ်မိမိတို့ရဲ့ထင်မြင်ချက်များကိုပေးပို့နိုင်ပါတယ်။[email protected]>>> Facebook <<<@==================https://www.facebook.com/[email protected]>>> Email <<<@[email protected]ကိုယ်တိုင်သုံးလို့အဆင်ပြေလျှင်မိမိတို့ရဲ့မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းတွေကိုလည်းဒီ App ကိုအသုံးပြုပြီး အွန်လိုင်းကနေတဆင့် ဆင်းမ်ကဒ်တွေကိုမှတ်ပုံတင်နိုင်ကြောင်း ပြောဖို့မမေ့ကြနဲ့နော် :)////////////////////////////////(Myanmar Unicode Font)မိမိတို့ရဲ့ဆငျးမျကဒျမြားကိုအှနျလိုငျးကနအေလှယျတကူမှတျပုံတငျလို့ရနိုငျမယျ့ Appဖွဈပါတယျ။မွနျမာနိုငျငံအတှငျးရှိ Telenor, MPT, Ooredoo,MecTelဆငျးမျကဒျမြားအားလုံးမှတျပုံတငျလို့နိုငျပါတယျ။အဆငျမပွတောတှေ ဒါမှမဟုတျမိမိတို့ရဲ့ထငျမွငျခကျြမြားကိုပေးပို့နိုငျပါတယျ။[email protected]>>> Facebook <<<@==================https://www.facebook.com/[email protected]>>> Email <<<@[email protected]ကိုယျတိုငျသုံးလို့အဆငျပွလြှေငျမိမိတို့ရဲ့မိတျဆှသေူငယျခငျြးတှကေိုလညျးဒီ App ကိုအသုံးပွုပွီး အှနျလိုငျးကနတေဆငျ့ ဆငျးမျကဒျတှကေိုမှတျပုံတငျနိုငျကွောငျး ပွောဖို့မမကွေ့နဲ့နျော :)
မင်ျဂလာနဒြာနဩ. မင်ျဂလာပါ﻿ပအိုဝျနလကျကှကျ ဇယားသညျ မွနျမာလကျကှကျ နှငျ့ အမြားအားဖွငျ့ဆငျတူပါသညျ။ မွနျမာ ပအိုဝျနယူနီကုဒျသညျ အက်ခရာတဈခုမှ ပုံသဏ်ဌာနျကှဲပွားသော စာလုံးပုံ အမြိုးမြိုးကို ခလုတျတဈခုတညျ (ကုဒျရောထညျ့သညျ )ဖွငျ့တညျဆောကျထားပါသညျ။ ဆိုလိုသညျမှာ ရရဈ ( အကွီး အသေး အပွတျ )အမြိုးမြိုး မရှိပါ။ ကီးဘုတျပျေါတှငျ ရရဈတခုသာ တှရေ့ပါမညျ။ ထို့အတူတဈခြောငျးငငျ နှဈခြောငျးငငျ အရှညျကိုလညျး တှရေ့မညျမဟုတျပါ။စာလုံးပေါငျး သတျပုံအတိုငျး ရိုကျနှိပျသှားပါက လိုခငျြသောစာလုံးပုံစံကို အလိုလြောကျ ပွောငျးလဲ ပေးပါလိမျ့မညျ။ ပအိုဝျနစာလကျရေးရေးသညျ့ အစီအစဉျအတိုငျး ရိုကျသှားရုံသာ ဖွဈပါသညျ။ ပအိုဝျနစာကိုရေးတတျသူတိုငျး ဖုနျးထဲတှငျ ရိုကျနိုငျရနျ ပွုလုပျထားသညျ့ ယခု ၂၁ရာစုခတျေ နညျးပညာ ဖွဈပါသညျ။PaOh Language Keyboard သညျ AnySoftKeyboard နဲ့တှဲသုံးရပါမညျAnySoftKeyboard နဲ့မတှဲသုံးရငျ ကီးဘုတျပျေါလာမညျမဟုတျပါ။AnySoftKeyboard နဲ့တှဲသုံးရပါမညျ AnySoftKeyboard လငျ့ဒေါငျးရနျနှိပျပါhttps://play.google.com/store/apps/details?id=com.menny.android.anysoftkeyboardကီးဘုတျအသုံးရာတှငျ စာလုံးအက်ခရာ အျောတိုပွောငျနလေို့အဆငျမပွပေါကကိုယျတိုငျပွနျပွုပွငျနိုငျပါတယျ Keyboard Settings / SpecialDictionaries / Show Suggestions ကို Off ထားပေးရပါမယျ။ပအိုဝျန ယူနီကုဒျ ကီးဘုတျ ရိုကျပုံရိုကျနညျးတဲငျးလိတျလဲုငျꩻ တဲငျးဗာနနိုငျးမဲုငျꩻက ကꩻ ကာ ကာꩻ ကား ကာနခ ခꩻ ခါ ခါꩻ ခါး ခါနမင်ျဂလာန = မ + ငျ +်+ လ +ာ+ နအုံဟဝျနေး = အ +ု+ံ+ ဟ + ဝ +ျ+ န +ေ+းကွောငျး = က +ွ+ေ+ာ + ငျ +းကမ်ဘာ = က + မ +်+ ဘ +ာမွှငျ့ = မ+ွ+ှ +ငျ+့ မွနျမာ ရှပေအိုဝျနလူငယျမြားအားလုံးအဆငျပွကွေပါစေ။Khon Soe Zaw Thuခှနျးစိုးဇျောသူ နှငျ့ ပအိုဝျန IT လူငယျမြားလှတျလပျစှာအကွံပွုနိုငျပါသညျ။[email protected]ဘလော့ paohdragonapp.blogspot.com
HUAWEI, HTC, Oppo, LG, Lenovo, i-mobile, ZTE,Sony, Acer, နှငျ့ Samsung မဟုတျသောအခွား Android ဖုနျးဗားရှငျး 4.2.2မှ 5.0.1 အထိဖုနျးမြားကိုမွနျမာယူနီကုဒျအမှနျသှငျးပေးနိုငျသော DragonUni Font Installer လေးပါ။ယခုဗားရှငျးသညျ ဖုနျးအားလုံးနှငျ့ Error အနညျးဆုံး အဆငျပွဆေုံးဖွဈအောငျပွုပွငျ မှမျးမံထားပါသညျ။ ဤဖောငျ့ခြိနျးသညျမွနျမာနိုငျငံ၏မိခငျ ဗမာစာ သာမက အခွားတိုငျးရငျးသား ပအိုဝျန၊ သြှမျး၊ကရငျ၊ စကောကရငျ၊ ပိုးကရငျ၊ ပလောငျ၊ ကခငျြ၊ မှနျစာပအေားလုံးပါဝငျပါသညျ။အသုံးပွုလိုပါက အောကျပါအတိုငျး အဆငျ့ဆငျ့ လိုကျလုပျရပါမယျ။Dragon Uni Font Installer ကိုအသုံးပွုရနျသငျ့ Android ဖုနျးကို Rootဖောကျထားရနျလိုအပျပါသညျ။Dragon Uni Font Installer ကိုဖှငျ့ပါ Check Root ကိုနှိပျပါ။ RootPermission တောငျးပါလိမျ့မညျ။ Grant သို့မဟုတျ Allowဖွငျ့လကျခံလိုကျပါ။ ပွီးရငျ Install Dragon Uni Fontဆိုတဲ့စာတနျးကိုနှိပျပါ။ ဖုနျးပိတျပွီးဖုနျးပွနျဖှငျ့လာရငျမွနျမာယူနီကုဒျဖောငျ့လနျးနိုငျပါပွီ။အခြို့ Android ဖုနျးသညျ BusyBox လိုအပျပါသညျ။မလိုအပျသောဖုနျးမြားကထညျ့စရာမလိုပါ။ BusyBox ကိုလိုအပျပါကဖောငျ့ခြိနျးသညျ့အခါ လိုအပျကွောငျးပွောပါလိမျ့မညျ။ BusyBoxကိုအရငျဖှငျ့ပါ Install ခလုတျကိုနှိပျပါ။ ပွီးရငျ Root Permissionတောငျးပါလိမျ့မညျ။ Grant သို့မဟုတျ Allow ဖွငျ့လကျခံလိုကျပါ။အခြိနျအနညျးငယျစောငျ့ပေးရပါမယျ။ပွီးရငျ Dragon Uni Font Installer ကိုဖှငျ့ပါ Check Root ကိုနှိပျပါ။Root Permission တောငျးပါလိမျ့မညျ။ Grant သို့မဟုတျ Allowဖွငျ့လကျခံလိုကျပါ။ ပွီးရငျ install MMUni Fontဆိုတဲ့စာတနျးကိုနှိပျပါ။ ဖုနျးပိတျပွီးဖုနျးပွနျဖှငျ့လာရငျမွနျမာယူနီကုဒျဖောငျ့လနျးနိုငျပါပွီ။စာရိုကျဖို့အတှကျ မွနျမာယူနီကုဒျကီးဘုတျကိုတော့ Play Store မှာ M3Keyboard(Myanmar) သို့မဟုတျ MUA Keyboard-ဗကေီးဘုတျ မိမိကွိုကျနှဈသကျရာ ဒေါငျးယူပွီးရေးသားနိုငျပါပွီ။ယခုဖောငျ့ခြိနျးနဲ့ပတျသကျပွီး လှတျလပျစှာမေးမွနျးအကွံပွုနိုငျပါတယျ။Khon Soe Zaw Thu (Facebook >>> Khon Soe Zaw Thu = http://www.facebook.com/khay.jar.hwa)[email protected](သို့မဟုတျ)Khun Htetz Naing (Facebook >>> Khun Htetz Naing =http://www.facebook.com/khun.htetz.naing)[email protected]သို့လာရောကျမမွေနျး အကွံပွုနိုငျပါတယျ။မွနျမာယူနီကုဒျအသုံးပွုထားသော ဂရုမြားသို့မိမိသိလိုသောအကွောငျးအရာမြားကို လာရောကျမေးမွနျးနိုငျပါတယျ။သိသမြှကိုလညျး ပွနျလညျမြှဝနေိုငျပါတယျ။MUA (Myanmar Unicode Area) >>> https://www.facebook.com/groups/mmUnicode/MPUA (Myanmar PaOh Unicode Area) >>> https://www.facebook.com/groups/883761834978908/PIY (PaOh IT Youth) >>>http;//www.facebook.com/paohitboys/အားလုံးအဆငျပွပြေျောရှငျနိုငျကွပါစေMyanmar PaOh Unicode Area နှငျ့ ပအိုဝျး IT လူငယျမြား
စာအုပ်ဆိုင် 1.0.0 APK
Mr Ar Kar
မြန်မာစာရေးဆရာများရေးသားထားသော နာမည်ကြီး စာအုပ်အစုံကို စာအုပ်ဆိုင်Appsထဲကနေ Download ဆွဲပြီးဖတ်ရှုနိုင်မှာဖြစ်ပါဆယ်။Download ဆွဲနိုင်မည့် စာအုပ်တွေကတော့နည်းပညာ စာအုပ်များဗဟုသုတ စာအုပ်များဘာသာပြန် စာအုပ်များကဗျာ စာအုပ်များကာတွန်း စာအုပ်များဝတ္ထု စာအုပ်များAndroid နှင့် iPhone ,ကွန်ပျူတာ စာအုပ်များနိုင်ငံရေး စာအုပ်များဆော့ဝဲရေးသာခြင်းဆိုင်ရာ စာအုပ်များ စတဲ့စာအုပ်အစုံကို စာအုပ်ဆိုင်Application တွင်ဒေါင်းလုပ်ရယူပြီးဖတ်ရှုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။Cardit ထားသော ဘလော့များလည်း Apps ၏ Webနေရာတွင်ဖော်ပြထားပါတယ်။စာပေဗဟုသုတ တိုးတက်စေချင်တဲ့ ဆန္ဒဖြင့် ပြုလုပ်ပေးထားတဲ့Appsဖြစ်ပါတယ်။
နည်းပညာ သတင်း 2.0 APK
နည်းပညာနှင့် ပတ်သတ်သော နောက်ဆုံးရသတင်းများကိုစုံလင်စွာဖတ်ရှုနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်၊ နောက်ဆုံးထွက်Software များ Game များနှင့် အခြားနည်းပညာအထွေထွေ ဗဟုသုတ ပေါင်းစုံစုစည်းထားသော Software ဖြစ်ပါသည်။ နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာလေ့လာနေသူများ၊ ရှာဖွေနေသူများနှင့် သင်ယူနေသူများ အတွက် Informationများစုစည်းပေးထားပါသည် ။Creditဖုန်း နည်းပညာ နှင့် Apk များhttps://www.facebook.com/MyanmarTechPointhttps://www.facebook.com/pages/နည်းပညာမြို့တော်/276834255807910https://www.facebook.com/pages/ကိုဇော်သွင်-နည်းပညာ/187700948034339https://www.facebook.com/pages/နည်းပညာစာအုပ်များနှင့်-ဖုန်းဆော့ဝဲလ်များမျှဝေခြင်း/708325075844191https://www.facebook.com/pages/နည်းပညာကမ္ဘာ-မှကြိုဆိုပါတယ်/525947874159305https://www.facebook.com/tchbankhttps://www.facebook.com/pages/နည်းပညာများဆီသို့ခရီးဆက်ခြင်း/425035540877644https://www.facebook.com/mwdtechနည်းပညာ သတင်းများhttps://www.facebook.com/techmyanmarhttps://www.facebook.com/pages/ဖေ့ဘုတ်ဆိုင်ရာ-နည်းပညာများ/174894622666931https://www.facebook.com/fishermanlay21https://www.facebook.com/imengineeringstudenthttps://www.facebook.com/pages/နည်းပညာနှင့်ဆော့ဝဲလ်/1445127609081953https://www.facebook.com/heinmynntechhttps://www.facebook.com/pages/ဖေ့ဘုတ်ဆိုင်ရာ-နည်းပညာများ/126021254215915https://www.facebook.com/pages/ဆေးရိုးသည်-နည်းပညာ/356436567818916ကွန်ပြူတာ နည်းပညာhttps://www.facebook.com/pages/နည်းပညာ-Software/1393529297586802https://www.facebook.com/pages/နည်းပညာ-စာအုပ်များစုစည်းမှု/243530699026957https://www.facebook.com/Einstein.tuhttps://www.facebook.com/pages/၀င်းလှိုင်-နည်းပညာ/1421462054744193https://www.facebook.com/KoSaithuMutiSoftwareTechnology
Myanmar RSS Reader 1.2.4 APK
Myanmar RSS Reader is light and modem android RSS/Atom feed readerand support many features to customize your favourite news.MainFeatures:- Download full articles when you have Wifi access andread offline- Support built-in myanmar font- Integrated manymyanmar Rss links - Compatible with tablets and phones- Searchwebsite feed- Import/export feeds (OPML)- Automatic or scheduledsynchronization (optional)- Small 1x1 widget with unread newscounter- 4x3 resizable news list widget- Zoom in and out news -Swipe left/right to view previous/next articles- Scrolling newswith volume keys (optional)- Show notifications (sound, light,vibration)- Share starred articles- Light or dark theme- Provide 11actionbar colors- Double touches to enter or exit full-screen modefor articles- Auto clear old news- And other options (Mark as read,unread, delete read entries)
Mobimax News APK
- မိုဘိုင်းဖုန်းဈေးနှုန်းများ- ဖုန်းနှင့်ပါတ်သတ်သောသတင်းများ၊ဖုန်းမော်ဒန်အသစ်များ နှင့် ပါဝင်သောပစ္စည်းများ၊-Mobimaxဖုန်းဆိုင်မှ promotion များ-Mobimax website မှ Game နှင့် Appများကို တစ်စုတစ်စီးထဲ ဖော်ပြပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
IT BANK 1.0 APK
IT နည်းပညာကို လိုက်စားနေတဲ့လူတန်းစားတွေအတွက်ကတော့ အဖိုးတန်တဲ့ Android Mobile Apk တစ်ခုဖြစ်တဲ့ IT Bank(Tech Knowledge) ဆိုတဲ့App လေးနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးပါ့ရစေဗျာ။ဒီ IT Bank(Tech Knowledge) Appလေးဟာဆိုရင် နည်းပညာဦးစားပေး App ဖြစ်တဲ့ အတွက် နည်းပညာနဲ့ပတ်သတ်တဲ့သတင်းတွေကိုပဲ သီးသန့်စဉ်ဆက်မပြတ်လေ့လာနေတဲ့ လူကြီးတွေကောလူငယ်လေးတွေကော အလွန်အသုံးတည့်မဲ့ App ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ ကျွန်တော်မျှော်လင့်မိပါတယ်။ဒီ App လေးထဲမှာ ပါဝင်တဲ့ နည်းပညာ List တွေဟာဆိုရင်အချိန်နဲ့ တပြေးညီ Up To Date ဖြစ်ပြီးအသုံးတည့် နည်းပညာဆိုင်ရာ သတင်း၊PC/Android/iOS တို့ရဲ့ Software၊Application၊ Game၊ Tutorials၊ Mobile နဲ့ပတ်သတ်ပြီး အစရှိတဲ့ပြည်တွင်းပြည်ပမှာရှိတဲ့ ဗဟုသုတ ရစရာ Web Page လေးတွေကိုမှရွေးချယ်ပြီး ပြုလုပ်ပေးထားတာဖြစ်လို့မိတ်ဆွေများ ကြိုက်နှစ်သက်လိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်မိပါတယ်။ITBank(Tech Knowledge) App လေးကိုအသုံးပြုဖို့ဆိုရင်တော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ Android Mobile Phone Internet ကို 5မိနစ်လောက်ဖွင့်ပေးပြီး (နည်းပညာသတင်းအသစ်များရယူရန်) ဆိုတဲ့ Tabလေးကိုနှိပ်ပြီးစောင့်နေလိုက်ပါ။သတင်းတွေ ၀င်လာပါလိမ့်မယ်။Post အသစ်တွေဝင်လာပြီဆိုတာနဲ့ Internetပိတ်ပြီး Offline Mode အနေနဲ့ ဖတ်ရှူ့လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။(Live) ဆိုတဲ့Tabs တွေမှာတော့ Online Stream တွေဖြစ်တဲ့အတွက် Offline Modeအနေနဲ့ဖတ်လို့မရပါဘူး။အဲ့ဒီ Tabs တွေက သတင်းတွေဖတ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ မိမိတို့ရဲ့ MobileInternet ကိုဖွင့်ပြီးမှ ဖတ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။မှတ်ချက် အနေနဲ့သတိပေးချင်တာကတော့ Zawgyi Fonts သုံး Android Smartphoneတော်တော်များများနဲ့ Zawgyi Fonts နဲ့ရေးထားတဲ့ Web Page က Postတွေမှာတော့မြန်မာဖောင့်ကို အဆင်ပြေမှန်ကန်စွာဖတ်ရှူ့နိုင်ပါတယ်။Unicodeအသုံးပြုထားတဲ့ Web Page ကလာတဲ့ Post တွေဆိုရင်တော့ Mobile Phone ရဲ့Menu Bar ကနေ Share ကိုနှိပ်ကာ မိမိ Android ဖုန်းမှာရှိတဲ့ GoogleChrome, Mozilla Firefox, CM Browser, Next Browser, UC Browserတို့ကို အသုံးပြုကာ ဖတ်ရှူ့နိုင်ပါတယ်။အသုံးဝင်တဲ့ Tutorials Web Page က Post တွေလိုချင်ရင်တော့ မိမိAndroid ဖုန်းရဲ့ Power Buttom+Volume Down ကိုနှိပ်ကာ Screen Shootရိုက်ယူ၍ သိမ်းဆည်းနိုင်ပါတယ်။Android ပေါ်က Browser တစ်ခုခုပေါ်ကကိုယ်နှစ်သက်တဲ့ Web Page တွေကို Pdf File အနေနဲ့Save လုပ်ပြီးသိမ်းထားချင်တယ်ဆိုရင်တော့ Web To Pdf ဆိုတဲ့ Android Apk Fileလေးကိုအောက်က Link ကနေ Download ရယူပြီး အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။တစ်ခုပြောဖို့ကျန်သေးတာကတော့ မိမိဖုန်းထဲမှာလဲ Adobe Reader,Moon Readerဆိုတဲ့ Pdf Reader Software လဲ Install ရှိထားရမှာဖြစ်တဲ့ အတွက်အောက်က Download Link မှာလဲ သွားရောက် Downloadရယူအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။IT Bank(Tech Knowledge) Android App လေးကို မိတ်ဆွေများအနေနဲ့အသုံးပြုရတာ နှစ်သက်သဘောကျမယ်ဆိုရင်တော့ ကျွန်တော်နဲ့အတူ Iconတွေကိုကူညီပြီး Design ဆွဲပေးခဲ့တဲ့ ကိုရဲရင့်လဲ အပင်ပန်းခံအချိန်ကုန်ခံ မျက်လုံးအညောင်းခံရကျိုးနပ်ပါတယ်။ဒီ IT Bank(TechKnowledge) App လေးဟာဆိုရင် Beta Version ဖြစ်တဲ့အတွက်လိုအပ်ချက်များရှိနေသေးခဲ့ရင်[email protected] ကို Mail ပို့ပြီးဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်ဗျာ။Adobe Reader Apk Download - http://goo.gl/gfchTHWeb To PDF Apk Download - http://goo.gl/NBz80VIT Bank App လေးဟာ Beta Version ဖြစ်ပြီးလိုအပ်ချက်များရှိနေသေးတဲ့အတွက် အသုံးပြုသူများ အဆင်မပြေတာတစ်ချို့များရှိနေခဲ့ရင် Mail ပို့ပြီးအကြံပေးနိုင်ပါတယ်။အသုံးပြုရတာမိတ်ဆွေတို့အတွက် အဆင်ပြေခဲ့မယ် အသုံးတည့်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ စေတနာကို အသိအမှတ်ပြုတဲ့ အနေနဲ့ ဖုန်းငွေဖြည့်ကဒ်များလဲလှူဒါန်းနိုင်ပါတယ်။IT Bank(Tech Knowledge)Contact [email protected]+95 9254047550 (MPT)
Today Myeik News APK
Welcome Today Myeik News on FacebookFanPagehttps://www.facebook.com/pages/Myeik-info/366419696792236https://www.facebook.com/pages/Myeik-Online-Market/480515472021055ကျနော်တို့၏myeik online market နှင့် myeik info တို့တွင်ကြော်ငြာထားသောဆိုင်များ ကုန်ပစ္စည်းကြော်ငြာများကို todaymyeik appတွင် updateလုပ်ပြီးသိရှိနိင်ပါသည် မြိတ်သတင်းများကိုလည်းတနောတည်းမှာဖတ်နိင်ပါတယ်တခြား ပြည်တွင်းပြည်ပသတင်းများနှင် ကားအကြောင်း နည်းပညာဗဟုသုတရနိင်မဲ့ siteများကိုလည်းထည့်သွင်းပေးထားကြောင်းသတင်းကောင်းပါးလိုက်ပါရစေခင်ဗျိာကျနော်တို့ adminများ လူအပင်ပန်းခံ အချိန်ခံပြီး လိုက်ပြီး မြိတ်မြို့ဖုန်းဆိုင်အများစုကိုဖြန့်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ် ဒါကြောင့် todaymyeik appမရှိသေးသော မြိတ်သူမြိတ်သားများကနီးစပ်ရာဖုန်းဆိုင်များမှာထည့်နိင်ပါတယ် computer ဆိုင်များဖြစ်ကြတဲ့sun- computer & service နှင့် IT care - computer & serviceတို့တွင်လည်းထည့််သွင်းနိင်ပါသည်မှတ်ချက်။။မိမိဆိုင်နှင့်ကုန်ပစ္စည်းများကို todaymyeik မှာကြော်ငြာထည့်ဖို့ကိုမြိတ်သူမြိတ်သားများကို ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ ...ဆက်သွယ်ရန်[email protected] (သို့) [email protected]သို့မေးလ်ပို့ပြီးကြောငြာနိင်ပါတယ်ခင်ဗျာ..မိမိဆိုင်ကြော်ငြာ နှင့်ကုန်ပစ္စည်းကြော်ငြာများအတွက် ဓာတ်ပုံ၊ အသေးစိတ်အချက်အလက် ၊ဆိုင်ဆိုရင်လည်း လိပ်စာအတိအကျနှင့်ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်းနံပါတ်တို့ကိုပေးပို့ကြော်ငြာနိင်ပါသည်ခင်ဗျာ..ဆိုင်နှင့်ကုန်ပစ္စည်းများကိုနံပါတ်အလိုက်တင်ပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အချိန်အနည်းအများစောင့်ရမှာဖြစ်ပါကြောင်းကြိုတင်အသိပေးလိုက်ပါစေခင်ဗျာ..ဒီအတွက်ကျနော်တို့ adminများကတောင်းပန်ပါတယ်နော်
Myanmar Web Media 1.0.8 APK
No.1 News app in Myanmar!Read all the latest Myanmar news, Facebookpage updates and internationalnews!Features:- You can select anynews you like by tapping on the pictures.- Zawgyi font alreadyinstalled in app to read news.- No internet needed to read yourprevious news, this application keeps allthe news in the app untilyou update them-Automatic update the new contents during internetaccess active.- Many new categories & topics in picturesavailable such as; Breakingnews, Business, Crime, Car Market,Education, Entertainment, Health,History, International News,Sports, Otaku, General Knowledge, BuddhaDhamma, Yangon local news& Technology. Daily updated commodity prices suchas Gold(Shwe), Silver, Currency Exchange, Rice, Oil, Gas, etc willbecoming soon.- You can also select your favorite RSS feeds such asYahoo, CNET, Reuters,Engaget, Kotaku, Gamespot, WSJ, etc.- Shareyour favorite news on Facebook.မြန်မာပြည်မှာအလွယ်ကူဆုံး သတင်း appဖြစ်ပါသည်။နာမည်ကြီး Media, News, Facebook page တွေရဲ့အသစ်တင်သမျှကို တစ်နေရာတည်းမှာဖတ်နိုင်ပြီ။Features:- သတင်းတွေ၊ဖျော်ဖြေရေးတွေကို ကဏ္ဍအလိုက်စုစည်းပေးထားပြီးလိုသလိုပြင်ဆင်နိုင်ပါတယ်။- Offlineလည်းဖတ်လို့ရပါတယ်။- ဇော်ဂျီး font သွင်းစရာ မလိုပဲဖတ်နိုင်ပါမည်။-Yahoo, CNET, WSJ, Gamespot, Kotaku, Reuters,အစရှိသည့်နိုင်ငံတကာသတင်းများကိုပါ တိုက်ရိုက်ဖတ်လို့ရပါမည်။